သက်ဝေ: ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ (၃)
Posted by သက်ဝေ at 5:50 PM
9-9 March 29, 2010 at 6:07 PM
9-9 March 29, 2010 at 6:08 PM
Rita March 29, 2010 at 6:23 PM
တော်သေးတာ ဘာမှန်းမသိခင် ရေးခဲ့လိုက်မိလို့။ ဘာမှန်းမသိလိုက်ရသေးခင်မှာဘဲ ခေတ်မီသွားခဲ့တယ်ဆိုတာ ခုမှ ပြန်သိလိုက်ရပါတယ်။
rose of sharon March 29, 2010 at 6:47 PM
TZA ဆိုတာဘာမှန်းလုံးဝမသိပါ... အတော်ခေတ်နောက်ကျပါသည် :(
ကလူသစ် March 29, 2010 at 7:58 PM
TZA ဆိုတာ သူဇာအောင်ကိုပြောတာပါကွယ် ခွိခွိ
ရှရွန်... တီဇက်အေ ဘလော့ကို မသိဘူးဆိုတာ တကယ်လားးးး
သူဇာအေး မဟုတ်ဘူးလားဟင် ကလူသစ်..ခိခိ
ရှရွန်ညီမရေ... တီအက်အေ ဘလော့ရဲ့နာမည်က ဒီကိုလာတဲ့။
ခု သက်ဝေညီမရဲ့ ဘလော့လစ်မှာ ကြည့်လိုက် ရှိတယ်။
ပြီးရင် သွားဖတ်တဲ့အခါ မပြုံးပဲ ၀ါးလုံးကွဲ ရယ်မိမယ်။
TZA March 29, 2010 at 9:03 PM
ဟာ.. ရှရွန်.. မရဘူးကွာ.. သိကိုသိရမယ်ကွာ.. မရဘူး.. မရဘူး.. မရဘူး..။
မသိမချင်းကော်မန့်လာရေးမယ်၊ မသက်ဝေ တချက်လောက် ရှောင်ပေးပါ။
khin oo may March 29, 2010 at 10:08 PM
May Moe March 29, 2010 at 10:37 PM
TZA ကိုသာမီးလဲသိဘူး :P
သက်ဝေ March 29, 2010 at 10:43 PM
ဟား... ဒီအတိုင်းဆို မသိတဲ့သူတွေ အတွက် Link ထည့်ပေးမှ ရတော့မယ်ထင်တယ် TZA ရေ...
ကြော်ငြာခ လာပေးလှည့်ပါ...း))
myo March 30, 2010 at 9:10 AM
မမသက်ဝေရေးထားတာကို သဘောကျလွန်းလို့ ခဏခဏ လာဖတ်နေမိတယ်..
ရွှေရတုမှတ်တမ်း March 30, 2010 at 9:18 AM
သူက ဒီကိုလာ လို့ဆိုပေမဲ့ ကိုယ်က ဟိုကိုသွားနေလို့(သွားတဲ့နေရာ ကလူသစ်သိတယ်) မတွေ့မိပေါင်ဗျာ..
သက်ဝေ March 30, 2010 at 9:32 AM
ညီမ ရီတာ က အစောကြီးထဲက ခေတ်မီနေသူပါ...း))
အမျိုးရေ... အားမငယ်ပါနဲ့.. နောက်တခါကျ ရေးပေးမယ်နော်...
ရှရွန်... ခုလောက်ဆို သိသွားပြီထင်ပါတယ်...
ကလူသစ်... တင်ဇာအေးပါ... ခွိ ခွိ..
အမ ခင်မင်းဇော်... TZA ဆီမှာ ကြော်ငြာခ သွားတောင်းမယ်.. အမလဲ လိုက်ခဲ့ပါ...း))
TZA.. ကိုယ် ရှောင်နေပါတယ်... ဟဲဟဲ...
Friend Kick ဆိုတော့ ဒီလောက်ပါပဲ... ဒါပေမယ့် ကြော်ငြာခတော့ ပေးစေချင်ပါတယ်...း))
မမ........................ သက်ဝေက အရပ်ရှည်တယ် လို့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပါ...
မေမိုးလေး... ပျောက်နေတာကိုး... ဘယ်သိပါ့မလဲ... :P
မျိုး... ဒါကြောင့် ဟစ်တွေ တက်နေတာကိုး... ခွိ ခွိ...း))
ကိုကြီးကျောက်... အသွားမတော် တလှမ်းနော်... (ဟဲဟဲ မတန်မရာနဲ့ လူကြီးကို ဆရာသွားလုပ်နေမိတယ်...) ကန်တော့... ကန်တော့...း))
tg March 30, 2010 at 9:33 AM
ခေတ်မီသွားသူ တစ်ယောက် အကြောင်းကို ခေတ်ကမ္ဘာခြားနေသူ လာဖတ်သွားပြီး အားငယ်သွားရပါကြောင်း... ( ကွန်မန့်မှာ ရေးလို့ မရလို့ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ရတဲ့ နေရာ ၀င်ရေးသွားပါတယ်.. )
Hmoo March 30, 2010 at 9:56 AM
Thant March 30, 2010 at 10:08 AM
ဟား..ဟား..ဟား...ခေတ်မီချင်တဲ့ အစ်မသက်ဝေ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ...... :D
MrDBA March 30, 2010 at 12:50 PM
ဟာ ကျွန်တော်ကျန်နေသေးတယ် ..မဖြစ်ဘူး ဒီညရေးမှပါ။ ကျေးဇူး
ကြည် March 30, 2010 at 1:13 PM
သဘောကျလိုက်တာ ။ ရေးလာလိုက်တာ ပိုစ့်က အရှည်ကြီး..နောက်ဆုံးမှ (ဘုရား… ဘုရား… တော်သေးပါရဲ့… လက်မတင်လေး… အချိန်မီ ရေးထည့်လိုက်နိုင်ပေလို့… ခွိ ခွိ… … …)ဆိုတာလေးကြောင့်။Friend Kick လို့ရေးထားတာလည်းကြိုက်တယ်။ သူများတို့လည်း နာမည်ကြီးချင်လွန်းလို့ ကော်မန့် မှာ အဲဒီနာမည်ကြီးဘလောဂ်ဂါ အမည်ကို မပါ ပါအောင် (ဇွတ်) ထည့်ပြီး မန့်ပလိုက်တယ်..အေးရော။
သက်ဝေ March 30, 2010 at 1:49 PM
သိင်္ဂီ... အားမငယ်စေချင်ပါ... အချိန်ရရင် စာတွေ များများပြန်ရေးပါနော်...း))
Hmoo... တခါတလေပါ... ဟဲဟဲ
သန့်ကလေး... ကျေးဇူး...း))
ကိုကိုဒီဘီ... ရေးပါ.. ရေးပါ... TZA နာမည်လေးနဲ့ ဘန်ကောက် ခရီးစဉ်လေး ဆက်ရေးပါ... ခွိ ခွိ ... ... ...
ဟုတ်တယ်... ရေးလိုက် မန့်လိုက်နဲ့ အခုတော့ ခေတ်မီသွားပြီပေါ့...း))
ပန်းခရမ်းပြာ March 30, 2010 at 4:30 PM
ဟယ် ... ခုလေးတင် ပို့စ်တစ်ပုဒ် တင်လိုက်မိတယ်။ သူ့နာမည် အစ အနလေးများ ပါသွားလေမလားလို့ ရှာလိုက်ဦးမယ်။ ခေတ်မီချင်လွန်းလို့ပါ။
သက်ဝေ March 30, 2010 at 4:35 PM
အခု မပါသေးရင် တနေရာရာမှာ ခပ်မြန်မြန်လေး ရေးထည့်လိုက်...
ဇွန်မိုးစက် March 31, 2010 at 12:41 AM
TZA နဲ့ ဒီဂိုလာ ကို တွဲမသိခဲ့ဘူး။ ခုမှ သိတယ်။
P.S. မမသက်ဝေရေးထားတာ ဖတ်လို့ကောင်း၊ ချစ်ဖို့ကောင်းး)
ရွှန်းမီ March 31, 2010 at 5:40 AM
ဖတ်ပြီးတော့ ခိခိ ဖြစ်သွားတယ် =)
သမီးဆို ခေတ်နဲ့အဝေးကြီး ဖြစ်နေပါပြီလေ..
Kyaw Nyo Thway March 31, 2010 at 2:37 PM
nu-san March 31, 2010 at 4:06 PM
မမသက်ဝေရေးထားတာ ဖတ်ပြီး ရီလိုက်ရတာ အမရယ်... နာမည်ကြီးရခြင်း အကြောင်းရင်းတွေကို သေသေချာချာ ၂ ခေါက်တိတိ ဖတ်သွားတယ် အမ.. :D :D
ခေတ်မီသွားပြီ...ခွိ ခွိ ...:)
ချစ်ကြည်အေး April 1, 2010 at 8:55 PM
အဲဒီ တီဇက်အေ ဆိုတာ...
Z ဇက်ပိုးကိုတောင်မှ မအုပ်နိူင်သူပါ
A အေရယ် ဆိုသူများလား....
ဇွန်မိုးစက် April 5, 2010 at 12:39 AM
ညီမလည်း ခေတ်မီချင်သူမို့ TZA ကို ထည့်ရေးမိရက်သားဖြစ်သွားတယ် မမရေ။ လာဖတ်ကြည့်ပါအုံး။း)
သက်ဝေ April 5, 2010 at 10:14 PM
သေချာတယ်... ညီမက အများကြီး ခေတ်မီသူ ဖြစ်သွားပြီ...း))
ရွှန်းမီ... ရေးပါ ညီမရဲ့... ညီမရေးတဲ့ အက်ဆေးလေးတွေ သိပ်ကောင်းပါတယ်...။
ညီမ နုစံ... တခါတခါတော့လဲ ရယ်စရာ ပျော်စရာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရေးရတာ ကောင်းတယ်လေ...
ချစ်ကြည်... TZA တော့ လျှာပဲ ကိုက်မိနေပလား... ခလုတ်တွေပဲ တိုက်မိနေမလား မသိဘူးနော်... ကိုယ်တို့ ဒီလောက် ဝိုင်းပြော ဝိုင်းရေးနေကြတာ.... ခွိ ခွိ ခွိ...
အဓိက ဇာတ်လိုက် ကို TZA နဲ့အတူ ပျော်စရာ ရေးထားတာကို ပျော်ပျော်ပါးပါး လာဖတ်ကြတဲ့ သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးဗျို့...